နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည် မှာအလုပ် လုပ်ဖိ&#4 - MYSTERY ZILLION
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည် မှာအလုပ် လုပ်ဖိ&#4
ကျွန်တော်ခုန chat ထဲကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက် စင်ကာပူမှာ အလုပ်၂ဖို့ ဘာတွေဘာတွေလိုအပ်မလဲ မေးတော့ MZ မှာ ဒီ thread လေးဖွင့်ဖို့အကြံရပါတယ်.. ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အတွေ့အကြုံ နည်းသေးတဲ့ အတွက် နှစ်ရှည်အလုပ်၂ နေကြပြီဖြစ်တဲ့ နောင်တော်တွေဆီကနေ ဗဟုသုတရချင်တာလည်းပါလို့ပါ..။ ဒီ thread မှာ ငြင်းနိုင်ပါတယ်...ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့်သိထားစေချင်တာကတော့ အားလုံးဗဟုသုတ ရစေချင်တဲ့ အတွက်ဆွေးနွေးနေကြတာပါဆိုတာလေးကို မေ့မပစ်ကြစေချင်ပါဘူး..။ ကျွန်တော်အရင်စမယ်ဗျာ..
သူကမေးတယ် သူပြောတဲ့ စကားလေးကိုအရင်ကြည့်ပါ.."ငါက english စာတော့ သိပ်မရဘူး ပြောရင်တော့နည်းနည်းနားလည်တယ် MICT မှာ ၃နှစ် လုပ်သတ်ရှိတယ်.. လခ ဘယ်လောက်ရရကွာ လုပ်ချင်တယ် ... လခကရေးမကြီးဘူး.."
ဟုတ်ပြီဗျ.. ကျွန်တော် အပါအ၀င် မြန်မာတော်တော်များများဟာ english ပိုင်းမှာအားနည်းကြပါတယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ myanmar ပြည်မှာ Office language အဖြစ်မသုံးတဲ့ အတွက် အလေ့အကျင့်မရှိတာတွေပေါ့ဗျာ.. ဒါကတော့ထားလိုက်ပါတော့... အဓိက ကတော့ အဲဒီအတွက်အချိန်ပေးနိုင်မူနည်းနေကြတာပေါ့..။ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ လူမျိုးခြားတွေနဲ့ ဆက်စံရတဲ့ အခါကြတော့ ကိုယ်ကိုတိုင်ရဲ့ သိက္ခာတင်မဟုတ်ပဲ ကို့လူမျိူးတွေရဲ့သိက္ခာ ဆိုတာရှိလာကြပြီဗျ..။ အဲဒီလို အထက်ကသူပြောခဲ့သို လခက အရေးမကြီးဘူးဆိုရင် ဘာလို့များသူများတိုင်းပြည်မှာ အရှက်ကကွဲခံမလဲဗျာ..။ ကိုယ့်ဘာသာကို့တိုင်းပြည်မှာ english စာကိုအချိန်ပိုပေးပြီး ကြိုးစားလိုက်ကြစမ်းပါ..။ အဲဒီလို ဖြစ်ခဲ့ရင် အဲဒီလူရဲ့ လခဟာ S$1800 ဆိုတာအနည်းဆုံးရပိုင်ခွင့်ပါ..။
ခုဖြစ်နေကြတာက ပိုက်စံတွေအများကြီး အကုန်ခံပြီး(ကိုယ့်ဘတ်ကမပိုင် ဘဲ) အလုပ်တွေ လာရှာကြတယ် မရနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ပေးသလောက် လခတွေနဲ့ လုပ်တယ် မရရင်ပြန်သွားကြရတယ်..ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်ပိုက်စံတွေ ဘယ်လောက်များ နှမြှော်စရာကောင်းလိုက်လည်းဗျာ..စင်ကာပူအစိုးရက အဲဒါတွေသိလို့ ၀င်သလောက်လက်ခံတယ် ပြီးအလုပ်တွေလျောက်ပြီဆိုရင် ချမပေးဘူး..ဟော..ပြန်ကြရပြန်ပြီပေါ့ဗျာ..။
အဲဒီမှာ ထပ်ပြီးဆွေးနွေးချင်တာက ရသလောက်နဲ့ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေပါ..။ ခု S-Pass နဲ့လုပ်နေတဲ့လူတွေ များသောအားဖြင့်ငြိှ့ကြတာက S$1000 ပေါ့ဗျာ..။ လောက်မယ်ထင်ပါသလား.. ရောက်နှင့်တဲ့လူတွေ အသိဆုံးပါ..။ ခုဆိုနေစရိပ်က ကမ္ဘာပေါ်က မြို့တွေအားလုံးမှာ စင်ကာပူက သတ္တမမြောက်နေစရိပ်အကြီးဆုံးပါ..။ ရထားခတွေကလည်း 0.05$ တတ်လိုက 0.10$ တတ်လိုက်နဲ့ အားလုံးနည်းနည်းခြင်းတက်နေတာပါ..။ ထားပါတော့..လေ. ။ အဲဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေ လာပါပြီဗျာ.. လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လူတွေအတွတ်က အဲလိုလူတွေရှိနေတဲ့ အတွက် လခတိုးတောင်းရာမှာခက်ခဲခြင်း၊ အလုပ်သစ်ရှာရာမှာ မြန်မာဆိုရင်....ဖြစ်ခြင်း၊ ဘောနပ်စ် တွေအရင်က ၃လစာပေးရာကနေ တစ်နှစ်လခရဲ့ 10% သာရတော့ခြင်း(ခုကျွန်တော်ကြားမိတာ တစ်ခုက ဘောနပ်စ် ကိုနောက်တစ်နှစ်မှ တစ်လခြင်းစီခွဲပေးတယ်.. ဆိုလိုတာက ခု ၁၀၀၀ ရတယ်ဆိုရင် နှစ်ကုန်ရင် ဘောနပ်စ်ကို အကုန်မပေးဘဲ နောက်တစ်နှစ်ဆက်လုပ်အောင် တစ်လကို ၁၀၀ ထပ်ပေါင်းထည့်ပေးတာပေါ့ဗျာ..အမှန်က လခတိုးမပေးချင်လို့ညစ်တာပါ..ဒါကိုလခတိုးရတယ်လို့ ထင်တဲ့လူတွေလည်းရှိကြပါတယ်..)
နောက်ဆုံးပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့တတွေ ကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မဖျတ်ဆီးပြစ်ဖို့ လိုသလို ကို့တိုင်းပြည်ရဲ့သိက္ခာ လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေကြသူတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကိုလည်းထည့်စဉ်းစားပြီး ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိငွေကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချဖို့လိုအပ်ပါတယ်..။
ပါ၀င်ပြီးဆွေးနွေးကြပါဗျာ..။ သိတဲ့ လူတွေလည်း ဖြည့်စွတ်ရေးပေးကြပါ..။~0):41:
အဲဂလိုကြီးလားဟင် နာတော့ ဘုန်းကြိးကျောင်းမှာကပ္ပိယပဲလုပ်တော့မယ် သံသ၇ာလဲကောင်းခုလဲသက်သာ :d:d
ဒီ topic နဲ့ ဆိုင်တဲ့ POST ၂ ခု ကို ကျွန်တော် experience ပေါ်မူတည်ပြီး ကျွန်တော် Site မှာ ရေးထားပြီး သားရှိပါတယ်။
If you want to come to Singapore for IT career - 1
If you want to come to Singapore for IT career - 2
ဆွေးနွေးလို့ရအောင် ဒီ thread ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။
(1) Experience ရှိရမယ်။
ဒါက အရေးကြီးဆုံးပါ။ လူဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိို လိမ်လို ့မရဘူး။ ငါဘာလုပ်နိုင်တယ် မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသိဆုံးပါ။ ကိုယ်ဘယ်လောက် Experience ရှိတယ်ဆိုတာ Certificate တွေ၊ Company
recommend Letter တွေပေါ်မှာ မသက်ဆိုင်ပါဘူး လို ့ထင်ပါတယ်။ ပြောမယ်ဆိုရင် ဒါတွေ အားလုံးကဖန်တီး ယူလို ့ရတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဘယ်လောက်တတ်တယ်။ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု ဘယ်လောက်
ရှိတယ် ဆိုတာမျိုးကတော့ ဖန်တီးပြီး ယူလို ့မရတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ခုသော အတိုင်းအတာ အထိ အချိန်၊ ငွေ၊ ခွန်အားတွေ စိုက်ထုတ်ပြီးမှ ရလာတာတွေပါ။ အဲ့ဒါတွေရဲ ့နောက်ကွယ်မှာ အဆုံးမဲ့သော သည်းခံမှု တွေ ၊ နာကျင်တဲ့ မျက်ရည်စတွေ တောင်ပါတတ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ကျတော့လည်း ဒါလေးတွေက ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အမှတ်တရ နဲ ့ပြန်ပြောလို ့ရမယ့် အရာလေးတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။ သေချာတယ်ဗျာ။ NO MAN IS PERFECT ဒါကြောင့် ဘယ်လောက်ပဲ လုပ်လုပ် Perfect ဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်စုံတစ်ခုသော အတိုင်းအတာအထိ Experience ရှိရမယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ ့Experience ပေါ်မှာ ယုံကြည်မှု ရှိရမယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှ ငါလုပ်နိုင်တယ်လို ့ယုံကြည်မှု မရှိရင် တစ်ခြားဘယ်သူကမှ ကိုယ့်ကို ယုံကြည်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
ဒါကြောင့် Experience နဲ ့Confidence ကအရေးကြီးပါတယ်။
(2) Education Background
ကျွန်တော်က IT သမားဆိုတော့ Education Background မှာလည်း IT နဲ ့ပတ်သက်တာကိုပဲ ဇောင်းပေးပြီး ရေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်မယ့် အလုပ်နဲ ့ကိုယ်ရထားတာတဲ့ ဘွဲ ့နဲ့ဆက်စပ်မှု ရှိတာက ကို်ယ့်ရဲ့အနာဂါတ် အတွက်တော်တော်လေးကောင်းတာကို တွေ ့ရပါတယ်။ Computer တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းများက IT လမ်းကို လျှောက်လှမ်းမယ်ဆိုရင် တစ်ခြားမေဂျာတွေကနေ ကျောင်းပြီးပြီး Computer ကို ၀ါသနာပါလို ့၀င်လာတဲ့ သူတွေထက် ပိုပြီးအခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက SG မှာ အလုပ်လုပ်ဖို ့ဆိုရင် Work Permit ရှိရပါတယ်။ အဲ့ဒီကို Work Permit တင်တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့Education Background ရှိတာမျိုးက တော်တော်ကို အထောက်အကူပြုတာတွေ ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပြောတာပါ။
(3) ဘာတွေ Study လုပ်သင့်သလဲ?
ဒီမေးခွန်းကတော့ ကျွန်တော့်ကို သူငယ်ချင်းတော်တော်များများက မေးပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း General ပဲ ဖြေနိုင်ပါတယ်။ Web အပိုင်းကို အဓိကထားပြီးတော့လုပ်၊ ပြီးတော့ asp.net က ပိုပြီး Job vacancy များတယ်ဆိုတာမျိုးလောက်ကိုပဲ ပြောနိုင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ဒီမေးခွန်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ပြီး မေးရမယ့် မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်က .net သမားဆိုရင်တော့ asp.net နဲ ့ဆိုင်တဲ့ Job Vacancy တွေကို ဒီ Job portal sites တွေ ဖြစ်တဲ့ Job Street နဲ့Job DB မှာ ၀င်ပြီး ကြည့်ပါ။ သူတို ့ဘာကို အဓိကလိုချင်တာလဲ ဆိုတာကို သိရပါမယ်။ အဲ့ဒီမှာ သူတို ့လိုချင်တာ အကုန်လုံးကတော့ ပြည့်စုံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် General အရ ဘယ်ဟာက အများဆုံးပါနေသလဲ ဆိုတာကို အဓိကထားပြီး ကြည့်ရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ပြီး စမ်းစစ်သင့်ပါတယ်။ သူတို ့လိုချင်တဲ့ skill မျိုး ငါ့မှာ ရှိလား၊ မရှိဘူးလား၊? ဆိုတာတွေပါ။ မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ လေ့လာပေါ့။ အဓိက ကတော့ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ Main Skill တစ်ခုကို မပျောက်စေနဲ ့ဗျာ။ အဲ့ဒါက အရေးကြီးတယ်။ ကျန်တာတွေကို General Knowledge အရ သိအောင်ဖတ်ရမယ်။ စမ်းကြည့်ရမယ်။ ဒါမျိုးကို ငါလုပ်လို ့ရပြီဆိုတာကို သိရုံလောက်ပေါ့။ ကိုယ့်မှာ Programming Language တစ်ခုခုကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရေးနိုင်တဲ့ Skill မျိုးကို မလွဲမသွေ မုချပိုင်ဆိုင်ထားရပါမယ်။ ပြီးမှ ကျန်တဲ့ တစ်ခြား Skill တွေကို ထပ်ပြီး မွမ်းမံတာ ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ Programming Language ပေါ်မှာ ဘယ်တော့မှ မျက်ခြေ အပျက်မခံပါနဲ ့။ ဆိုလိုတာကတော့ asp.net လုပ်နေရင် နောက်ဆုံး ပြောင်းသွားတဲ့ Framework မှာ ဘာတွေပါ
လာလဲ။ ဘာ Feature အသစ်တွေ ပါလာလဲ ဆိုတာကို သိထားသင့်တယ်။ PHP သမား ဆိုရင်လည်း JQuery၊ AJAX စတဲ့ တွဲဖက်ပြီး အသုံး၀င်တဲ့ အရာတွေကို သိထားသင့်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် HTML5ကို Change နေပါပြီ။ ဒါတွေနဲ ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း မျက်ခြေမပျက် သင့်တဲ့ အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု အနေနဲ ့ထပ်ပြီး ပြောချင်တာကတော့ study လုပ်တယ်ဆိုရာမှာ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်က တစ်ကယ် ၀ါသနာမပါဘဲ အလုပ်ရှာရလွယ်လို့Programming Language တစ်ခုခုကိုအမြန်သင်ပြီး ထွက်လာတာမျိုးကိုတော့ မလုပ်သင့်ဘူးလို ့ထင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်၀ါသနာပါရင် တစ်ကယ် Programming ချစ်ရင် ဘယ်သူ့မှ သင်ပေးစရာ မလိုပါဘူး။ Google မှာ Reference တွေ လိုက်ရှာရင်း ပျော်မွေ ့နေသူအတွက် Language တိုင်းဟာ Study လုပ်စရာတွေပါ။အချုပ်ပြောချင်တာကတော့ တစ်ကယ် ၀ါသနာပါမှ Programmer ကို လုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
(4) English Language ကို လေ ့လာရန်
English Language ကို တတ်နိုင်သလောက် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ပြောဆိုနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒီ Singapore မှာ Officially က English ကိုပဲ သုံးကြပါတယ်။ SG မှာ အလုပ်ရှာနေစဉ်အတွင်းမှာ ဒီ Government Office တွေနဲ့ စကားပြောရတာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ Interview မှာလညး် English ကောင်းရင် ကောင်းသလောက် Interviewer ကို စွဲဆောင်စည်းရုံးလို ့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက သူတို ့English က တရုတ်သံ၀ဲနေတာဆိုတော့ ကိုယ်က English ကို သေသေချာချာ သိထားမှ ပြန်ပြိး Communicate လုပ်ရတာ လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ သူတို ့ကလည်း Broken ကိုယ်ကလည်း Broken ဆိုရင်တော့ သိပ်မမိုက်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော် ဥပမာ ပေးချင်တာက ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ပြောနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာစကားကို သေချာမပြောတတ်တဲ ့တိုင်းရင်းသား တစ်ဦးကနေပြီး ကိုယ့်ကို မြန်မာလို လာပြီး ပြောရင် ကျွန်တော်တို ့နားလည်တယ်လေ။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် မြန်မာ ဘာသာစကားကို ရင်ထဲကနေကို သိနေလို ့ပါပဲ။ English ကိုလည်း အဲ့ဒီလိုမျိုး မဟုတ်ရင်တောင် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ရင်ထဲမှာ ထဲထဲ၀င်၀င် သိနေရင် ပိုပြီး အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ သူတို ့ရဲ ့လေးစားမှုကိုလည်း အတိုင်းအတာ တစ်ခု အထိရပါတယ်။ တစ်ချို ့သော အလုပ်တွေမှာ Programmer က Client နဲ ့တိုက်ရိုက် Communicate လုပ်ရတာ
မျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တတ်နိုင်သလောက်တော့ အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောခဲ့တဲ့ စကားလေးကို သတိရမိတယ်။ ဒါကတော့ вЂњ အင်္ဂလိပ်စာ တတ်ရင် ဘာလုပ်လို ့ရလဲလို ့вЂќ မေးတဲ့ သူတွေကို вЂњ အနည်းဆုံးတော့ အင်္ဂလိပ်လို ဆဲလို ့ရတာပေါ့вЂќ လို ့ပြောခဲ့တာလေးကို သတိရမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို ့တွေ International ကို ၀င်ဖို ့ရာ အင်္ဂလိပ်စာကို မလုပ်မနေလုပ်ရမယ့် အရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(5) Self-Study လုပ်တတ်ခြင်း
ဒီ Self-Study လုပ်တယ်၊ Reference တွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှာတယ် ဆိုတာမျိုးတွေက ကျွန်တော်တို ့မြန်မာလူငယ်တွေမှာ တော်တော်ကို တွေ ့ရနည်းတဲ့ အကျင့် တစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်အပါအ၀င် ပါပဲ။ ကျွန်တော်
ကိုယ်တိုင်လည်း Singapore ကို ရောက်မှ Self-Study လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ကို ကျင့်သားရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Self-Study လုပ်ဖို ့ရာ Internet Connection တွေ Library တွေလည်း လိုပါတယ်။ ဒါတွေကြောင့်လည်း
ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေ Self-Study လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အားနည်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို ့တွေ ညံ့နေလို့မဟုတ်ဘူးလို ့ထင်ပါတယ်။ Self-Study လုပ်တယ်ဆိုတာ ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ဆေးခါးကြီးလို ့ပဲဗျ။
ဒါပေမယ့် လူနာက လိုနေရင်တော့ သောက်ရတော့မှာပဲ။ အဓိက ကတော့ အကျင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျင့်ဆိုတာနဲ ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့7habits ထဲက ဟာလေးကို ပြန်ပြောပြမယ်။
вЂњ အစမှာတော့ အကျင့်တွေကို ငါတို ့က လိုက်လုပ်ရတယ်။ နောက်တော့လည်း အကျင့်တွေက ငါတို ့ကို ပြန်လုပ်သွားလိမ့်မယ်вЂќ ဆိုတဲ့ စကားလေးပါ။
ကျွန်တော် Programmer စပြီး လုပ်ခါစတုန်းက error တက်ပြီ ဆိုရင် ဘယ်သူ ့ကို မေးရမလဲ ဆိုတာပဲ စဉ်းစားနေတယ်။ ကျွန်တော် ထင်တာက Internet မှာ ဒါမျိုးတွေကို ရှာလို ့ရမယ်လို ့မထင်ခဲ့မိဘူး။ ပြောရမယ်ဆိုရင်
Google ကို ကောင်းကောင်း မသုံးတတ်တာပဲဗျ။ ဒီလိုနဲ ့ဒီလို error မျိုးကို ပြောပြနိုင်မယ့် သူကို အသဲအသန် လိုက်ရှာခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူတို ့ကလည်း General လောက်ပဲ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အကျင့်ကြီးက အရိုးထဲစွဲ
နေလေတော့ Singapore ရောက်တဲ့ အထိ ပါလာပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ စပြီး တွေ ့တော့တာပါပဲဗျာ။ ကျွန်တော့် အလုပ်ထဲမှာ ဗမာ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး။ ရေးရမှာကလည်း တစ်လုံးမှ မသိတဲ့ Joomla နဲ ့PHP ဆိုတော့ တော်တော့်ကို ဒုက္ခ ရောက်သွားတာပေါ့။ အဲ့ဒီမှာတင် အလုပ်ထဲက ex colleague တွေက တစ်ခုခုဆိုရင် Google ကို တော်တော် အသုံးချတာကို ကျွန်တော် တွေ ့လိုက်ရတယ်။ တကယ်ပြောတာ Google ကို အဲ့ဒီလောက်ထိ အသုံး၀င်မှန်းကို မသိခဲ့တာပါ။ ဒီလိုနဲ ့နောက်ပိုင်းကျတော့ Googling လုပ်ရင်း Self-Study ကို အကျင့်ပါပြီး ပျော်ရွှင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက မသိတဲ့ ဟာတစ်ခုကို ဘယ်လို တွေ ့အောင် ရှာမလဲ၊ ဘယ်လို Googling လုပ်မလဲ၊ ဘယ်လို Self-Study လုပ်မလဲ၊ ဆိုတဲ့ အကျင့်ကို လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း အလုပ်ထဲမှာ မလုပ်တတ်တာတွေ၊ မသိတာတွေ ကြုံလာရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် Self-Study လုပ်ပြီး ကျော်လွှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာကတော့ Internet နဲ ့Reference Book တွေ စုံစုံလင်လင်ရှိတဲ့ Library ကတော့ ရှိပါတယ်။ Self-Study လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ကိုသာ မွေးမြူပျိုးထောင်ပြီး လာခဲ့ပါလို ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
6) အလုပ်ရှာဖို့ Stay လုံလုံလောက် ရရှိရန်
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Social Visit နဲ ့SG ကို ၀င်လာပြီး အလုပ်ရှာနေတဲ့သူတွေကို နေထိုင်ဖို ့Stay ကို ၂လ အများဆုံး ပေးတာကိုတွေ ့ရပါတယ်။ Changi Airport ကိုရောက်ရင် immigration officer ကနေပြီး တော်တော်များများကို ၁လ Stay ပေးလိုက်တာများပါတယ်။ တစ်ချို ့ကံမကောင်းပြီး စကားပြောအဆင်မပြေရင်တော့ ၂ပတ်။ ဒါထက်ပိုပြီး ကံဆိုးရင်တော့ airport ကနေပြီး လှည့်ပြန်သွားရတာမျိုးကိုလညး် တွေ ့ရဖတ်ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်လာမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကို PR Sponsor ပေးတဲ့သူရဲ ့HP No၊ သူ ့နံမည်၊ အလုပ်အကိုင်၊ လိပ်စာ စတာတွေလောက်ကိုတော့ သိထားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့Ph no တွေအားလုံးကို သေချာရေးပြီး ယူလာတာကောင်းပါတယ်။ air port ထဲမှာ အကြောင်း တစ်ခုခု ဖြစ်နေရင် တစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက်ဆီ လှမ်းပြီး ဆက်သွယ်နိုင်အောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် SG
အ၀င်မှာ ၁လရဖို့အဓိကပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Immigration Officer နဲ ့စကားအဆင်ပြေအောင်ပြောပြီး ၁လ Stay ရအောင် ယူခဲ့ဖို ့က အရေးကြီးပါတယ်။ White Card နဲ့Pass Port ကို အသက်နဲ ့လဲပြီးသာ ကာကွယ်ပါလို ့လည်း သတိပေးပါရစေခင်ဗျာ။
ဒီ ၁လ အတွင်းမှာ အလုပ်မရသေးရင် နောက်ထပ် extension ကို Online ကနေပြီး Visa Stay တိုးလို ့ရပါတယ်။ 80% လောက်ကတော့ First Time Extension တိုးရင် ရတာက များပါတယ်။ ဒီ Online Extension ကပြောထားပြီးသား Data စုံလင်တယ်ဆိုရင် ၁လပေးရမယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ကြိမ်ကို ထပ်ပြီး တိုးမပေးတော့ဘူးလို ့ရေးထားပြီးသားပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ပြောတာပါ။ အများဆုံးကတော့ ၂လလောက်ပဲ Stay ရကြတာများတယ်လို ့။
7) Cover Letter & Resume ကို သင့်တော်သလို ပြင်ရေးတတ်ခြင်း
ကိုယ့်အလုပ်လျှောက်မယ့် Company နဲ ့လိုက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ ့Resume ကို သင့်တော်သလို ပြင်ဆင်မွမ်းမံပြီး ရေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်လျှောက်ချင်တဲ့ Company Web Site ကို ၀င်ပြီး ကြည့်မယ်ဆိုရင် General Information ကို Guess လုပ်လို ့ရနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် ကိုယ့် Resume လေးကို သင့်တော် သလိုလေးပြင်ပြီး Send သင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Cover Letter ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ mail ကို လက်ခံရရှိတဲ့ အခါ Cover Letter ကို အရင်ကြည့်ပြီး စိတ်၀င်စားမှ Resume Attachment ကို ဆက်ပြီးဖတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Cover Letter နဲ့Resume ကို သင့်တော်သလို ပြောင်းလဲရေးနိုင်ဖို ့ရာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
8) Interview Phone Call များနဲ့Interview ၌ အဆင်ပြေအောင် ပြောဆိုရန်
သူတို့Office မှာ Interview မလုပ်ခင်မှာ Phone နဲ ့အရင် Interview လုပ်တာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ သေချာတယ် စစချင်း 1 call ,2call လောက်ကတော့ သူတို ့ပြောတာ နားမလည်တာနဲ့အူကြောင်ကြောင် ပြီးသွားမှာပဲ။ တစ်ကယ်လို ့သူတို ့က Interview ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ သွားရမယ့် Address ကို ကိုယ့် mail ကို သေချာပို ့ခိုင်းတာကောင်းပါတယ်။ သူတို ့ပြောတာကို လိုက်မှတ်လို ့ကတော့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ သူတို ့Interview ခေါ်တဲ့ mail ရလာရင် သွားရမယ့်နေရာကို Internet မှာ ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်ကတော့ Street Directory Web Site ကို သုံးပြီး ရှာကြပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ရှာလိုက်ရင် အနီးစပ်ဆုံး MRT (ဘူတာရုံ) ကို သိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကမှ တဆင့် မသွားတတ်ရင်လည်း TAXI ငှားပြီး သွားရင်လည်း ရပါတယ်။ အချိန်ကို ကြို ပြီး ပိုပိုမိုမို ယူပြီးသွားသင့်ပါတယ်။
Interview မှာလည်း ကိုယ့်ကို Interview နေတဲ့ သူကို မကြောက်နဲ ့ဗျာ။ သူ ့ကို ကြောက်နေရင် ကိုယ့်ကို အထင်သေးသွား လိမ့်မယ်။ ကိုယ့်က တစ်ကယ့် Technology Theory ကို သိထားရင် ပြောသာပြောဗျာ။ ကိုယ့်ရဲ ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ရှင်းပြနေတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ ့သာ သဘောထားပြီး စကားပြောပါ။ ဒါမျိုးကတော့ ပထမ၊ဒုတိယ Interview တွေမှာ ရဖို ့မလွယ်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော့် တုန်းကဆိုရင် သူ ့ကြည့်ပြီး ဘာစပြောလို ့ပြောရမှန်းကို မသိတော့တာ။ ၁၀ မိနစ်လောက်လည်း ပြောပြီးရော သူက မင်းပြန်တော့တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ပြီး သုံးသပ်တယ်။ ငါဘာလိုနေလဲ၊ ငါဘာမှားသွားလဲ၊ ငါ့ကိုဘာကြောင့် သူတို ့အလုပ်မခန် ့တာလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစားတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် ဒါမျိုး အခွင့်အရေးရခဲ့ရင် ဒီလို အမှားမျိုးကို မဖြစ်အောင်တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ရတာပေါ့။ Interview တွေက များသောအားဖြင့် Personal Interview, Technical Interview ဆိုပြီး
General2မျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ Personal Interview မှာ OK ရင်တော့ သူတို ့က Technical Interview ကို Computer နဲ ့ဖြစ်စေ၊ On Paper ဖြစ်စေ၊ Programming Questions၊ Database Questions တွေကို မေးတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Technical Interview အောင်သွားရင်တော့ နောက်ဆုံး ကတော့ သူတို ့က ကိုယ်နဲ ့လစာ စကားပြောပြီးတော့ Work Permit ဖြစ်တဲ့ (SPass,EP) တင်ဖို ့စတဲ့ လိုအပ်တာတွေကို ပြောပြီး Interview ဆိုတဲ့ အဆင့်ကြီး ပြီးမြောက်သွားပါပြီ။ အလုပ်ရပြီလို ့ပြောနိုင်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကို ဒုန်းဒုန်း မချနဲ ့အုုံးဗျို ့။ လာအုံးမယ် နောက်တစ်ဆင့်вЂ¦
9) အလုပ်လုပ်ခွင့် Permit (SPASS, EP) approve ဖြစ်ရန်
အလုပ်ရပြီး ဒီ Permit ကို Government က ချမပေးရင်တော့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကတော့ ကံတရားနဲ ့လည်းဆိုင် ပါတယ်။ ဘုရားသာ များများရှိခိုးနေပေတော့။ ဘုန်းကြီးကျောင်းလေး ဘာလေးလည်းသွားပြီး အဓိဌာန်လေးဘာလေးလည်း လုပ်ပေါ့။ လုပ်သင့်တာကတော့ SG စရောက်ကတည်းက လုပ်သင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်က ပိုပြီး အရေးကြီးတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Permit Approve မဖြစ်ရင် နောက်အလုပ်တစ်ခုကို ထပ်ပြီး ရှာရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အချိန်မှာ Stay ကုန်သွားလို ့ကတော့ Malay ကို Stay ရှောင်မလား? Myanmar ကို ပြန်မလား? စဉ်းစားရပါတော့မယ်။ ၂လ Stay ကုန်
သွားလို ့ကတော့ Extension ထပ်ပြီး တိုးဖို ့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Stay2Week လောက်ကျန်နေကတည်းက Backup Plan တစ်ခုကို ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါပြီ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ၂လစာ သုံးဖို ့ပိုက်ဆံကိုလုံလုံလောက်လောက်ယူလာသင့်ပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်း ကြောင့် Malay ကို Stay ရှောင်ရတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်လို ့ပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ Company က တင်ပေးတဲ့ Permit ဖြစ်တဲ့ SPASS, EP ကို approve ဖြစ်တာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ SG Government ရဲ ့Policy တွေနဲ ့ဆိုင်တာဖြစ်လို ့ကိုယ်က ဘာမှလိုက်လုပ်လို ့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တတ်နိုင်တဲ့ ကောင်းမှု ကုသိုလ်လေးလုပ်ပြီး
ဆုတောင်းတာမျိုးလေးတွေကို လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ ကံကောင်း ကြပါစေဗျာ။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ အထဲမှာ လိုအပ်တာ လေးတွေ ရှိမှာ သေချာပါတယ်။
တစ်ကယ်လို့၀င်ရောက် အကြံပေးချင်တယ် ထောက်ပြချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Welcome ပါပဲ ခင်ဗျာ။ ။:67::67:
Mr Zack ဆွေးနွေးသွားတာ အနှစ်သာရရှိပါတယ် ။
နိုင်ငံရပ်ခြားကိုသွားပြီးအလုပ် လုပ်ချင်သူတိုင်း လေ ့လာဖတ်ရှုထားသင် ့ပါတယ် ။
Mr Zast ရဲ့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ ့ခဲ ့တာတွေကို စေတနာအရင်းခံထားပြီး တင်ပြထားသည် ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အနည်းငယ်ဖြည် ့စွက်လိုတာက အလုပ်ရှာဖွေခြင်း ( Job Hunting ) ကို ဒီထက်မက ပြည် ့စုံအောင်တင်ပြနိုင်ရင် ပိုပြီးပြည် ့စုံသွားလိမ် ့မည်ဟု အကြံပြုခဲ ့ပါသည် ။
ဥပမာ-- နေ ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာ ( The Straight Time ) မှ အလုပ်ရှာပုံ ။
ဒီနေရာမှာ ကို Dr.Know ပြောလို့ ကျွန်တော်အလုပ်ရှာခဲ့ပုံလေး ပြောချင်ပါတယ်..။
စင်ကာပူစရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ အဓိက အရေးကြီးတာက ဖုန်းတစ်လုံး ရှိနေဖို့ပါ.။ သူငယ်ချင်းတွေမှာ အပိုရှိတယ် ဆိုရင်လည်း ငှားလိုက်ပါ..။ ဒါပေမယ့်ကို အလုပ်မရသေးခင်လုံး၀ ဖုန်း NO. မပြောင်းသင့်ပါဘူး..။တခါတစ်လေ ကိုရောက်ခါစက လျောက်လိုက်တဲ့ ကိုမမှတ်မိတဲ့ company ကနေပြန်ဆက်သွယ်တာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်..။
ကျွန်တော် S'pore ကိုရောက်တော့ အသိတစ်ယောက်ဘဲရှိပါတယ်။ သူလည်း ရောက်တာ ၃လပဲ ရှိပါသေးတယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော့ကို နေစရာရှာပေး ထားတာကလွဲလို့ဘာမှ မကူညီနိုင်ပါဘူး( WP နဲ့လုပ်နေတာဆိုတော့ ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်)။ ကံကောင်းတာက ကျွန်တော်တည်းတဲ့ အိမ်က internet သုံးလို့ရခြင်းပါ..။ ကျွန်တော် မနက်ကို ၅ လောက်ထတယ် ။ဘုရားရှိခိုးပြီ သွားတြိုက်မျက်နှာသစ် ပြီးတာနဲ့ နီးစပ်ရာSeven Eleven သို့ Cheers ဆိုင်တွေကနေThe Straight Time သတင်းစာ အပြေးအလွား၀ယ်တယ်...breakfast အတွက်လည်းတစ်ခါထဲ အလွယ်၀ယ်ခဲ့လိုက်တာပေါ့ဗျာ..။ အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ကိုနဲ့ဆိုင်ရာ vacancy တွေရှာ ကတ်ကြီးလေးနဲ့ကိုက် အဓိကထားတာကတော့ walk in interview တွေပေါ့ဗျာ..အဲဒါတွေက ချက်ချင်းကြိုက်ရင် ချက်ချင်းခန့်တာကိုး။ company တွေအဓိကခေါ်ကြတာက Singaporean သို့ PR တွေများတယ်ဗျ..။ ဒါလည်း သွားသာသွားပါ..သူတို့ကြိုက်ရင်ခန့်မှာဘဲဗျ..။breakfast ကို email လိပ်စာပေးထားတဲ့ ဟာတွေ ကွန်ပျူတာဖွင့်ပြီးတခါထဲ လျောက်ရင်းစားလိုက်တယ်....ဗျ။ တစ်လက်စထဲ Jobsdb နဲ့ Jobstreet က up to date ဖြစ်နေတာလေးတွေပါ ၀င်လျောက်လိုက်သေးတယ်လေ..။ ဒါတွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့ အချိန်ဆို အိမ်ရှင်တွေ အခန်းဖေါ်တွေ နိုးတာနဲ့ ကွတ်တိဗျ..။ သူတို့တွေကို ခုန ကသတင်းစာဖြတ်ပိုင်းလေးတွေပြပြီး ဘယ်လိုသွားရတယ်ဆိုတာမေးတော့တာ ပေါ့.. အနီးဆုံး ရထားဘူတာ လောက်သိရင်ဖြစ်ပြီလေ..။ အဲဒါပြီးတော့ နီးစပ်ရာတွေကို အစီအစဉ်ချရပြီပေါ့ ဘယ်ဟာကအနီးဆုံး ဒါကြောင့် သူက ပထမဆုံးသွားရမှာ နံပါတ် ၁..။ အဲဒါပြီးရင် နံပါတ် ၁ နဲ့ အနီးဆုံးဟာ နံပါတ် ၂ ပေါ့..။ အားလုံးပြီးသွားပြီ ဆိုတာနဲ့ ရေမိုးချိုးပြီး လိုအပ်တာတွေယူပြီးလိမ့်တော့ တာဘဲ..။ ကျွန်တော် အလုပ်ရတာကံကောင်းလွန်းလို့ ဆိုတာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘဲသိတယ်ဗျ..။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်က အဓိကကြ တာကို မလုပ်ဘဲနဲ့ သူများတွေနဲ့ လိုက်ရောင်၀ါးတာဗျ ..။ ဘယ်လိုရောင်၀ါးလည်းဆိုတော့ ကိုက Full time job လာရှာတာကို အဲဒါအဓိကမထားမိဘဲ Part time job တွေလိုက်လုပ်နေတယ်လေ..။ Part time job တွေနဲ့ လွတ်မှ interview သွားတယ်..။ တော်တော်လေးမှားခဲ့ပါတယ်..။ နည်းပေးမယ့်သူလည်းမရှိဘူးကိုး..။ ထားလိုက်ပါတော့ဗျာ..။ နောက်ဆုံး ကျွန်တော်ပြောချင်တာက လုံး၀ဇွဲမလျော့နဲ့ စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့ ဆိုတာပါ..။ ကျွန်တော်ဆို ကိုယ့်ဘက်က တာ၀န်ကျေအောင်ကျိုးစားတယ်ဗျာ.. မရင်ရင်တော့ကံလို့ဘဲမှတ်တယ်..စိတ်စဉ်းရဲမနေဘူး.. ၂ လပြည့်ဖို့ ၃ရက်လိုသည်ထိအလုပ်မရသေးဘူးဗျ..။ အဲတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ် ငါစင်ကာပူကိုရောက်လာပြီ ပြန်ဖို ၃ရက်ဘဲလိုတော့တယ်..ဒီတိုင်းပြန်သွားမလား..။ ကျွန်တော်ချက်ချင်း အခန်းဖော်တစ်ယောက်စီက camera တစ်လုံးငှားပြီးလိမ့်တော့ တာဘဲဗျို့ ..။ ဟုတ်တယ်လေ ငါးမရရေချိုးပြန်မယ်..အမှတ်တရဖြစ်အောင်တော့ ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့..။ ရထားစီးလာပြီးလမ်းတစ်၀က်ရောက်တော့ ဖုန်းကထမည်ရောဗျ..။ လွန်ခဲ့တဲ့ လက email နဲ့ ကျွန်တော် resume ပို့ထားတဲ့ company ကပါတဲ့ interview လာနိုင်မလားတဲ့ ။ ဘာပြောကောင်းမလည်းဗျာ..။ အဲဒီ company နဲ့ ok သွားတာ malay ကို stay ရှေင်ဖို့တောင် company ကစရိတ်ခံပြီး မန်နေဂျာကိုယ်တိုင် လိုက်လုပ်ပေးတယ်..လေ(singaporean တွေက Malay ကို ၀င်ထွက်ဖို့လွယ်တယ်လေ..)။
ကျွန်တော် ပြောချင်တာက အပေါ်က ကို zack ပြောသွားသလို ကိုယ့်ကိုကို မလိမ်ပါနဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ..။ ကိုကြိုးစားရဲ့သားနဲ့မဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် အနည်းဆုံးတော့ကိုယ့် စိတ်ကိုလုံ တာပေါ့ဗျာ..။ မကြိုးစားလို့ မဖြစ်ခဲ့ရင်သာ...........
ကို Zack ရေးထားတာ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ကျနော့အတွက်အခက်ခဲဆုံးက နောက်ဆုံးအဆင့် အဆင့်ကိုး ။
Academic qualification တွေ အရေးမကြီးဘူးလို့ ကျနော်လည်း ထင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုတော့ အဝေးသင် degree တစ်ခုကတောင် တော်တော်အထောက်အကူဖြစ်တာတွေ့ပါတယ်။ လခကောင်းတိုင်းလည်း မရပါဘူး။ Degree တစ်ခုပါရင် chance များပါမယ်။ ကို Zack ပြောသလို သက်ဆိုင်ရာ degree မျိုးဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။
Cover letter နဲ့ Resume ကောင်းကောင်းကတော့ လိုပါတယ်။ လုပ်တတ်ကြတာက Cover letter ကို general ရေးထားပြီး ဘာလာလာ ဒါနဲ့တင်။ ဖြစ်နိုင်ရင် မလုပ်ပါနဲ့။ သင့်တော်သလို ပြန်ပြန်ရေးပါ။ ကျနော်တို့ အလုပ်လျှောက်လွှာတွေက HR လက်ထဲကဖြတ်တာပါ။ HR က technical သိတာမဟုတ်ဖူး။ Cover letter မှာ impress ဖြစ်မှ Resume ဆက်ကြည့်မယ်။ Resume မှာ လည်း strong ဖြစ်ဖြစ် ရေးထားမှ Interview အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းမှာပါ။
Language skill ကပြင်ဆင်ကိုပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ Interview မှာသွားပြီး တောင်ကြည့်မြောက်ကြည့် 'this is humm this is umm' ဆိုရင်တော့ :)
အနည်းဆုံးတော့ ရေရေလည်လည် သွက်သွက်လက်လက်ပြောနိုင်ရင် ကောင်းပါမယ်။ Interview ကိုမြန်မာတွေလာလာပြီး ပေါက်ကရ english တွေပြောပြောနေလို့ ပြန်ပြန်လွှတ်နေရတာ များလာရင်တော့ မြန်မာကို အထင်သေးနိုင်တယ်။
Technical skill ကတော့ မပြောတော့ ဘူးဗျာ ။ Technical အလုပ်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖို့စဉ်းစားရင် Technical skill အနည်းဆုံး knowledge ကောင်းရမှာပါပဲ။ မဟုတ်ရင်တော့ သေချာကြိုးစား ပြင်ဆင်မထားရင်တော့ အလည်လာတာလို့ သဘောထားပေါ့ဗျာ။ ဓာတ်ပုံတွေများများရိုက် လျှောက်လည်။
Topic starter ရဲ့ post မှာ Information ပေးနိုင်ဖို့ရေးထားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ အချက်လေးတွေ ပြန်ဖြည့်ပေးပါရစေ။
Bonus က Singapore မှာမှ မြန်မာကိုမှ ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ Restraint ထိကျတဲ့လူတွေတောင် နိုင်ငံတကာမှာ အများကြီး ရှိနေတော့ ငါကြမှ ကံဆိုးနေတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ ( Bonus ကိုပုံမှန် အတိုင်းပေးနေတယ့် company တွေလည်းရှိနေသေးတယ်)
S$1000 ဆိုတာ WP ရဲ့ လခပါ။ Spass ကို 1000 နဲ့ခေါ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုရင် အလုပ်အရေးတကြီးလိုမှန်းသိလို့ company က ညစ်တာပါ။ Agent ကနေလာလို့ 1300 လောက်နဲ့ရောက်လာကြတဲ့လူတွေတော့ ရှိတယ်။ Contract နဲ့မဟုတ်ရင် Spass ရဖို့က ပထမ နောက်မှ အလုပ်ပြန်ပြောင်းယူမယ်လို့ စဉ်းစားကြတာများပါတယ်။ ဒါမှန်တယ်လို့ပြောရပါမယ်။ Valid stay ရှိမယ် ဝင်ငွေရှိမယ် အလုပ်ကောင်းကောင်းပြန်ရှာရတာ ဘာမှမရှိပဲရှာရတာထက် တော်ပါသေးတယ်။ ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ Singaporean အလုပ်လက်မဲ့တွေတောင် များနေတော့ ကျနော်တို့ Foreigner တွေအတွက် ပိုခက်တယ်ဗျာ။ အဲဒါလည်းထဲ့စဉ်းစားရမှာပါ။
မြန်မာဆိုရင် အထင်သေးတယ်ဆိုတယ့် စကားမျိုးလေးတွေ့လိုက်ပါတယ်။ ခပ်ညံ့ညံ့မြန်မာတွေ လုပ်သွားတဲ့ Company ကနောက်ထပ်မြန်မာဝင်လာမှာကို အလိုမရှိတာမျိုးပဲဖြစ်မှာပါ။ IT ပိုင်း Engineering ပိုင်းမှာ မြန်မာတွေက Talent ရှိတယ်လို့ နာမည်ရပါတယ်။ Infrastructure ပိုင်းအားနည်းတဲ့နေရာက လာတာမို့လို့ ကျနော်တို့ စစချင်းမှာ မသိတာတွေ များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာအများစုက ကြိုးစားကြပါတယ်။ Weekend တွေကို စာတွေရှာဖတ် လေ့လာနဲ့ ချက်ချင်း အလုပ်ထဲမှာ လိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြတယ်။ မကြိုးစားတယ့် သူတွေအတွက်ကတော့ ဘာတွေမှန်းကိုမသိပါဘူးကွာ ဆိုတာမျိုးကနေ မတက်ပါဘူး။ ကျနော့ company မှာ ရှေ့က မြန်မာ လေးယောက်လုပ်သွားပါတယ်။ အားကိုးရတယ့် လူတွေကြီးပဲမို့ မြန်မာဆိုရင်ကို india တွေလို တော်တယ် ကြိုးစားတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ Welcome လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကို Zack ရဲ့ Company ကလည်း မြန်မာညံ့တယ်လို့ ထင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကို MyoK ရဲ့ Company လည်း မြန်မာတွေတော်တယ်လို့ မြင်လာမှာပါပဲ။
Encouragement အနေနဲ့ တစ်ခုပြောပါရစေ ။ Singtel မှာ မြန်မာတွေ အများကြီးကို ရှိပါတယ်။ SingTel မှာ CCIE နှစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်က ကျနော်တို့ မြန်မာပါ။ Katong က Singtel telecom office မှာ ကျနော်တို့ GTC thanlyin က EC Telecom engineer တွေ အဖွဲ့လိုက်ရှိပါတယ်။ Starhub, HP, IBM, NCS, SCS, Micron တို့လို Company ကြီးတွေမှာ မြန်မာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့က မြန်မာကို အထင်သေးမယ်ဆိုရင် ခန့်မယ် မထင်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်ရဲ့ သိက္ခာ လို့ပြောရင် ဘာမှမသိ ဘာမှလည်းမတတ် ကြိုးစားချင်စိတ်မရှိ လွယ်လွယ် အရှုံးပေးချင်တယ့် လူတွေ များများထွက်မလာရင် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်အမြင်ပါ။ အပြစ်တင်တဲ့လေသံမျိုး ပါသွားခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ ဘယ်တော့လောက်တော့ ငါတို့ company မှာလူလိုလိမ့်မယ် ဘာတွေပြင်ဆင်ပြီး လာခဲ့ပါ ဆိုရင်တောင် တကယ်မပြင်ဆင်တဲ့ ညီငယ်တွေနဲ့ပဲ တွေ့နေ ဆုံနေလို့ အားငယ်စိတ်လျှော့တဲ့လေသံတွေပဲ ကြားကြားနေရလို့ ဒါတွေပြောရင် ဒေါသနည်းနည်းပါလာတတ်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ။ :67::67:
ကို Divinity ပြောသွားတာ လူငယ်တွေ အတွက်တော့တော် တော်အားကျစရာပါ..။ ကို Divinity ကျွန်တော့ကို နားလည်မူလွဲနေတာလေး ရှိပါတယ်..။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာစင်ကာပူက မြန်မာဆိုရင် အထင်သေးတယ်ဆိုတာမျိုး ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျ..။ ၂၀၀၇ လောက်က ကျွန်တောစင်ကာပူမှာ အလုပ်ရှာခဲ့တာဗျ...။ အဲဒီအချိန်က ကျွန်တော်မြန်မာတစ်ယောက်ပါ အလုပ်ကြော်ငြှာထားတာ တွေ့လို့ ဖုန်းဆက်လိုက်တာပါ ဆိုရင် ဘယ်လို ဟာမျိုးဖြစ်ဖြစ် interview လာခိုင်းပါတယ်..။ ခုကျွန်တော် Networking ပိုင်းနဲ့ ဆိုင်မဲ့ အလုပ်မျိုးပြောင်းချင်လို့ အလုပ်ခေါ်တာတွေတွေ့လို့ ဖုန်းခေါ်လိုက်ပြီဆို မြန်မာလို့ဘဲ ပြောရသေးတယ် မြန်မာဆိုရင် Sorry ပါဆိုတာတွေဘဲတွေ့နေရတယ်ဗျ..။ ဒါကြောင့်ပါ.တကယ်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေလာရှာကြတဲ့ အခါပိုခတ်သွားမှာမျိုးကို မလိုလားဘူးဗျာ.။.ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကလည်း နောက်လာကြမယ့်လူငယ်တွေကို ပိုင်အောင်လုပ်လာကြဖို့ ရဲရဲတင်းတင်း ပြောရဲကြဖို့ပါ..။:):)
ကို MyoK ရေ ကျနော်နားလည်မှုလွဲသွားတယ်ဆိုရင် sorry ပါ။ တစ်ချို့က တကယ်ကို အဲလိုထင်နေကြလို့ပါ။ Nationality ကြောင့် အခက်အခဲပိုတယ်ဆိုတာမျိုး အငယ်တွေကထင်မှာကို မလိုလားလို့ပါ။
2006 - 2007 လောက်က အလုပ်အခွင့်အလမ်းပိုများခဲ့တယ်ထင်တယ်။ 2008 မှာ ရှားလာပြီ 2009 ကတော့ပြောမနေပါနဲ့တော့ဗျာ။ :P:P PR / Singaporean မဟုတ်ရင် ပို chance နည်းတာပေါ့။ Local ပဲလိုချင်တာ ဆိုတဲ့ Company တွေများနေတယ်။ Nov - Feb လောက်မှာ ပုံမှန်ကို opening နည်းပါတယ်။ တကယ်ကို ပိုနည်းတာပါ။ Dec end မှာ annual bonus တွေပေးကြတယ် Holiday ကလည်းများတော့ အလုပ်ပါးတတ်တယ်။ Feb မှာ chinese new yr ၊ တစ်ချို့ company တွေက bonus ပေးသေးတယ်။ အဲတော့ ဒီ bonus တွေယူပြီးမှ အလုပ်ပြောင်းမယ် ဆိုတဲ့လူများလို့ထင်တယ်။ ကျနော့သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးကတော့ တစ်သံထည်းပဲ။ Feb end ထိတော့ ဒီမှာလုပ်လိုက်အုန်းမယ် ဆိုတာကြီးပဲ။
အရေးတကြီး မဟုတ်ရင် (gf က စလုံးရောက်နေလို့ အတင်းလိုက်ကို လိုက်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုး မဟုတ်ရင်ပေါ့ဗျာ) အချိန်နည်းနည်းပိုယူပြီး ပြင်ဆင်လာစေချင်တယ်။ လာမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကို ပြောတာပါ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း တစ်ယောက်ယောက်ကို ရှာခိုင်း Interview ရမှလာ ။ အကြံပေးတာပါ။ :67::67:
ဟာ အေးဗျ.. အကိုပြောမှသတိရတယ်.. ဟုတ်မယ်ဗျ အဲဒီဘောနပ်စ်တွေကြောင့် ခုတလော အလုပ်ရှာတာ မလွယ်တာဖြစ်မယ်..။ Online ကရှာလည်းလုံး၀ ပြန်စာမလာဘူးဗျာ..။ ကျွန်တော်ကျောင်းတက်နေတော့ ကျောင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အလုပ်လေးပြောင်းချင်နေလို့ဗျ..။ ဒါဆိုရင်တော့ နည်းနည်းပြန်စောင့်လိုက်ဦးမယ်.:65:. ကျေးဇူး..:67:
ဟုတ်ပါတယ်။ Dr.Know ပြောတာ။ ကျွန်တော် ဒီ Job Hunting အပိုင်းကို ပိုပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးလို ့ရပါတယ်။ အခုလိုမျိုး အကြံပေးတာ ကျေးဇူးနော်အစ်ကို။ ။
ဒီအပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အပေါ်မှာ ကို MyoK ကလည်းရေးထားတာတွေ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒါလေးနည်းနည်းလောက် ထပ်ဖြည့်ချင်ပါတယ်။
Job Hunting မျိုးကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?
SG မှာ အလုပ်ရှာမယ်ဆိုရင်တော့ များသောအားဖြင့် Job Portal Web Site တွေကို သုံးကြပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော် သိသမျှ site တွေပါ။
ပြီးရင်တော့ SG မှာ နေ ့စဉ်ထုတ်တဲ့ သတင်းစာကြီးရှိတယ်။ Straits Times လို ့ခေါ်တယ်။ သတင်းစာထဲမှာပါတဲ့ ကဏ္ဍတွေက များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Job နဲ ့ဆိုင်တာကတော့ Classify ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ ကိုယ်နဲ ့ဆိုင်တဲ့ Job မျိုးကို တွေ ့အောင်သာရှာပြီး apply လုပ်ဖို ့သာ ပြင်ပေတော့။ သတင်းစာထဲက ခေါ်တဲ့ အလုပ်မျိုးက ပိုပြီး urgent ဖြစ်တာမျိုး များပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမြန်လျှောက်သင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ်ကနေစပြီး Phone ဆက်ပါ။ вЂњငါမင်းရဲ ့Job Opportunity ကြော်ငြာကို Straits Times သတင်းစာထဲမှာ တွေ ့တယ်။ ငါနဲ ့သင့်တော်မယ်လို့ထင်မိတဲ့ အတွက် ငါ့ကို Interview စီစဉ်ပေးလို ့ရမလား?вЂќ ဆိုပြီး ကိုယ်ကနေ သူတို ့ဆီ Phone စပြီး ဆက်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒီ Straits Time သတင်းစာက Wed, Sat နေ ့တွေ မှာဆိုရင် Job Vacancy တွေ ပိုပြီး များများပါတာကို တွေ ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် အကြံပေးချင်တာ တစ်ခုကတော့ ကိုယ်လျှောက်ထားပြီးသား အလုပ်တွေရဲ့email နဲ့တစ်ခြား Information သေချာ ရေးမှတ်ထားတာ ကောင်းပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ကြာလာရင် လျှောက်ပြီးမှန်း မသိ ဇေ၀ဇ၀ါတွေ ဖြစ်လာတတ်လို ့ဗျာ။ History ရှိတော့ ပြန်စပ်ဆက်လို ့ရတာပေါ့ဗျာ။ အခုတော့ ဒီလောက်ပဲ စဉ်းစားလို ့ရသေးတယ်ဗျာ။ ။
အပေါ်မှာ ညီကိုတို့ ဆွေးနွေးထားတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ IT Skill နဲ့ ပတ်သတ်တာကိုလည်း ဝင်ပြီး ဆွေးနွေးချင်ပါသေးတယ်။ ခုတော့ မျက်လုံးက ဒုက္ခပေးနေလို့ မနက်ဖန်မှပဲ ဆက်ပါတော့မယ်ဗျာ။ :103: